Smart Launcher၊ အလင်း၊ ကွဲပြား။ အလွန်အသုံးဝင်သော Launcher | Androidsis ပါ
Smart Launcher သည်အလွန်ပေါ့ပါးသော Launcher ဖြစ်သည်
စမတ်ဖွင့်တင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် launcher နည်းနည်းလောက်ဝါးစားဖို့အခွင့်အလမ်းကိုငါလက်တွေ့ကျကျတွေ့ခဲ့တယ် android app စတိုး, Play Store ကို.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာရှိသည် လုံးဝအခမဲ့ဗားရှင်းအထောက်အပံ့ကဲ့သို့အရေးကြီးသောကန့်သတ်ချက်အချို့နှင့် Desktop widget များ၎င်းတွင်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးပါ ၀ င်သော pro version တစ်ခုသော့ဖွင့်ထားသည်။
အဓိကကွာခြားချက်များ စမတ်ဖွင့်တင် သူတို့ကိုသာမန်မျက်စိနဲ့ငါတို့စစ်ဆေးနိုင်တယ်၊ အဲဒါကအဲဒါဘဲ သငေ်္ဘာကျင်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ၀ ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြသသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် desktop အောက်ခြေတွင်တည်ရှိသော classic dock ကိုအစားထိုးထားသည်။ သငေ်္ဘာကျင်း ပူဖောင်းကဲ့သို့စားပွဲခုံ၏အလယ်ဗဟို၌စက်ဝိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းထားသည် နာရီဝစ်ဂျက်j.
ဘယ်ဘက်တွင်ရှိသောအောက်ခြေတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည် app အံဆွဲကိုသုံးခွင့် ၎င်းတို့ကိုအဆင်ပြေရန်အမျိုးအစားငါးမျိုးဖြင့်စုစည်းထားသည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကဲ့သို့သောအရာများစွာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် နာရီဝစ်ဂျက်အပြင်အဆင်အရောင်၊ desktop နောက်ခံ၊ status bar မြင်နိုင်စွမ်းစသည်
ငါဒီအပလီကေးရှင်းကနေသတိပြုမိတဲ့အဆိုးဆုံးအရာကတစ်ခုပဲ၊ အဲဒါကအခမဲ့ဗားရှင်းအတွက်အထောက်အပံ့မပါတာဘဲ။ desktop ဝစ်ဂျက်များမဟုတ်ရင်အဲဒါကaပါ launcher လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည်၎င်း၏အကြောင်းပြချက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသည်၊ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးသည်ဖော်ပြရန်ထိုက်တန်သည်၊ ၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြရမည့်အရာတစ်ခုခုရှိလျှင်၎င်းသည်အကန့်အသတ်ဆုံး terminal များ၏အရင်းအမြစ်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်၎င်း၏ကြီးမားသော optimization ဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးသင်၏ browser ကိုရှာဖွေရန်အလွန်အကြံပြုထားသော application ဖြစ်သည် အခမဲ့ဗားရှင်း ၎င်းကိုအကန့်အသတ်မရှိဗားရှင်း ၀ ယ်ရကျိုးနပ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်သည်။
ဒီအပလီကေးရှင်းကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။ သင်အခပေးဗားရှင်းကို ၀ ယ်လိုပါသလား။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် Android Apps - ဒီနေ့ Big Launcher UCCW Skin
စမတ် Launcher ကို 6
စမတ် Launcher Pro ကို 3
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Smart Launcher သည်အလွန်ပေါ့ပါးသော Launcher ဖြစ်သည်
Artemio စတား ဟုသူကပြောသည်
ငါအဲဒါကိုသုံးပြီးအခပေးဗားရှင်းကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ minimalists များအတွက်ဤအရာသည်ရွေးစရာဖြစ်သည်။
Artemio Estrella အားပြန်ပြောပါ
၂ နှစ်လုံးလုံးငါအဲဒါကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်၊ အစားထိုးတာကိုငါလက်မခံဘူး။ ၎င်းသည်လျင်မြန်သည်၊ သပ်ရပ်သည်၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအခြားသူများထံမှလက်ကားပစ္စည်းများလက်ခံသည်။
ကားလို့စ် Molina: D ဟုသူကပြောသည်
Carlos Molina D ကိုပြန်ပြောပါ
Samsung Galaxy S, Rom SlimBean Android 4.3 အပတ်စဉ်ဗားရှင်းများ